ဆွီဒင်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဆွီဒင်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (AB) ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများပေးပါသည်။ နိုင်ငံခြားသား AB ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။
အဆိုပါအတိုကောက် "AB" ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုအဘို့အဆွီဒင်ဖြစ်သည့် "Aktiebolag" ကိုဆိုလိုတာပါ။
ဆွီဒင်ဟာမြောက်ပိုင်းဥရောပစကင်ဒီနေးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအနောက်ဘက်မှနော်ဝေ, အရှေ့ဘက်ဖင်လန်နယ်စပ်, နှင့်အနောက်တောင်ဘက်အတွက်ရေလမ်းÖresundဖြတ်ကူးတဲ့တံတား / ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများကဒိန်းမတ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်။
ဒါဟာတရားဝင် "ဆွီဒင်၏နိုင်ငံတော်" ဟုခေါ်သည်။ နိုင်ငံရေးအရ, တက "တစ်ဦးပါလီမန်နှင့်အတူစုစည်းဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်" အဖြစ်ဖော်ပြထားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာတအိမ်တည်းရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါလီမန်တစ်ဦးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်, နှင့်၎င်း၏ဧကရာဇ်ဘုရင်ကသူ Carl XVI Gustaf ရှိပါတယ်။
အစောပိုင်း 12th ရာစုကတည်းကတစ်ဦးကစုစည်းနိုငျငံတျောသညျ။ ဒါဟာ 1995 အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ဆွီဒင်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (AB) အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဆွီဒင်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (AB) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုထောက်ပံ့:
•စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားရှယ်ယာရှင်များမှာ: တစ်ခု AB ထဲမှာရှယ်ယာအားလုံးနိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ကျင်းပနိုင်ပါသည်။
•တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: သာလျှင်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး AB ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါသည်။
•တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: ဒေသခံတဦးကဒါရိုက်တာလိုအပ်ပါသည်။ နှစ်ဦးကိုနိုင်ငံခြားဒါရိုက်တာတစ်ဦးအများစုတို့အတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။
•အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ဝေမျှမယ်မြို့တော်: လောလောဆယ်လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် 5,500 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
•အီးယူအဖွဲ့ဝင်: ဆွီဒင်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အပြည့်အဝအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် (အီးယူ) အခြားအီးယူအဖွဲ့ဝင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းများဖွင့်လှစ်။
ဆွီဒင်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (AB) အမည်
အားလုံးကုမ္ပဏီအမည်များကိုဆွီဒင် Bolagsverket အစိုးရအေဂျင်စီကအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားအလားအလာကုမ္ပဏီအမည်များကိုမရရှိနိုင်လျှင်ကြည့်ရှုရန် Bolagsverket နှင့်အတူစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပြုထားကုမ္ပဏီအမည်ကို၏ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်ကြောင့် 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့သိုထားနိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီနာမ၌အချို့သောစကားလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းကို "ဘဏ်" သို့မဟုတ် "အအုပ်စုကို" အတှကျသို့မဟုတ် "အာမခံ" အတွက်ကဲ့သို့သောအထူးလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပေမည်။
ရှယ်ယာရှင်များ '' liabilities ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်ဖွဲ့၎င်းတို့၏စုစုပေါင်းပံ့ပိုးမှုများကိုဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး AB ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်ဆိုနိုင်ငံတွင်နေထိုင်မည်သည့်နိုင်ငံသား၏နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာ AB ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲရန်တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပေမည်။ ပညတ္တိကျမ်းဆွီဒင်အတွက်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာလိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကသို့သော်, ဒါရိုက်တာများဖြစ်လိုသောနိုင်ငံခြားသားများအထဲကအားလုံးအရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များအပေါ်နေထိုင်သူညွှန်ကြားရေးမှူးမဲပေးနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ထဲကနှစ်ခုကိုခနျ့အပျသငျ့သညျ။
ဌာနေဒါရိုက်တာအမြဲတမ်းဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူများ, သို့မဟုတ်ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာ (ဓနသဟာယ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတိုင်းပြည်, ဒါမှမဟုတ်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) တွင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်စေ, ဆွီဒင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆွစ်ဇာလန်၏နိုင်ငံသားတစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်စေခြင်းငှါ ။ ဤအလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှရရှိသောစေခြင်းငှါ
ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်သည့် Bolagsverket မှာထိန်းသိမ်းထားနှင့်လက်ရှိထားရှိမည်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အများပြည်သူစစ်ဆေးခြင်းမှအများပြည်သူစံချိန်ဘာသာရပ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော် (50,000 ယူရိုဝန်းကျင်လက်ရှိတွင်) 5,500 SEK ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေမျှမယ်မြို့တော်အတွက်ငွေသားသို့မဟုတ်တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Appraiser ဒါမှမဟုတ်စာရင်းကိုင်တန်ဖိုးထားထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူအခြေပြုနိုင်ပါသည်။
Authorized Juridical ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်တစ်ဦးကိုဒေသခံအခွင့်အာဏာအဆက်အသွယ်လူတစ်ဦးခနျ့အပျနိုငျသညျ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုကုမ္ပဏီဖိုင်တွေနဲ့မှတ်တမ်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။ မဟုတ်သလိုဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုတာဝန်ယူမှု, တာဝန်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားပြုမှုအခွင့်အရေးရှိသည်ပါဘူး။ အာဏာပိုင်တွေအဆက်အသွယ်လူတစ်ဦးကအစိုးရကိုမရရှိနိုင်နေသောဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အမှု၌သာရရှိနိုင်သည်။
အဆိုပါ (2017) လက်ရှိကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 22% ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွီဒင်ဟာနယ်မြေအခွန်တိုင်းပြည်မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေဟာသူတို့ရဲ့ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုများတွင်ပါဝင်သည်။
ဆွီဒင်အတွက်လုပ်သားကုမ္ပဏီများဆှီဒငျအခွန်အာဏာပိုင် (Skatteverket) နဲ့သူတို့ကို register ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆွီဒင်နှင့်သူတို့မှာလည်းဆွီဒင်အခွန်အာဏာပိုင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရသောတိုင်းပြည်များအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အခွန်သဘောတူစာချုပ်၏လမ်းဖြင့်ဆွီဒင်မှလူမှုလုံခြုံရေးအခွန်ပေးဆောင်ကုမ္ပဏီများ။
အများအပြားကအခွန်အာဏာပိုင်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ပေးရမည်ဖြစ်သောအခွန်အခွင့်အာဏာအသစ်ကုမ္ပဏီ၏အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိ။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်:
◾အလုပ်ရှင်များ '' မှတ်ပုံတင်။
◾ VAT အခွန်ဆောင်မှတ်ပုံတင်ရေး;
◾အခြားအခွန်မှတ်ပုံတင် (မြိုင် / ပုပ် ombud, Personliggare နှင့်ရေညှိမှတ်ပုံတင်ရေး, etc)
တိုင်းကုမ္ပဏီ Bolagsverket နှင့်အတူနှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးကြေညာချက်ဖိုင်များကို။ ဖိုင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေခုနစ်လအတွင်းလိုအပ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များယူရိုသို့မဟုတ်ဆွီဒင်ခရိုနာဖြစ်စေသုံးပြီးဆွီဒင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရမည်ဖြစ်သည်။
ထက် ပို. သုံးန်ထမ်းအလုပ်သမားကုမ္ပဏီစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများအားလုံးစာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များပြင်ဆင်မည်မည်သူတစ်ဦးစာရင်းစစ်ကိုခနျ့အပျရမယျ။ သုံးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်န်ထမ်းတွေနဲ့ကုမ္ပဏီများအနေနဲ့စာရင်းစစ်ဖျော်ဖြေခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဆိုပါရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးကိုကျင်းပရမည်ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးများဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ခွင့်ပြုထားပါသည်အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့်တွေ့ဆုံ။
ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီများသည် (Aktiebolag) ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်း၏ရက်သတ္တပတ်ရှောင်ရှားရန်ဝယ်ယူဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကဆွီဒင်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (AB) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း: နိုင်ငံခြားသားများအပေါငျးတို့သရှယ်ယာ, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှယ်ယာမြို့တော်နိမ့်ဆုံး, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးကဒေသခံအများစုအောင်နိုင်ငံခြားဒါရိုက်တာများနှင့်အတူလိုအပ်သည့်ဒါရိုက်တာနှင့်အီးယူအဖွဲ့ဝင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။